Story behind Namrata Shrestha Nepali Blue Film - Indian Girls Nude XXX Images
Story behind Namrata Shrestha Nepali Blue Film
नेपाली सिनेमाकी चल्तीकी नायिका नम्रता श्रेष्ठ अश्लील भिडियोको विवादमा फसेकी छिन् । म्युजिक भिडियोकी महँगी र सिनेमाकी ‘चुजी’ नायिका नम्रताको ‘मेरो एउटा साथी छ’ काठमाडौंका हलहरूमा प्रदर्शन भइरहेको छ ।
नम्रता र किचयम चित्रकार
(डिजे तान्त्रिक) ले सहवास गरेको लाइभ दृश्य भन्दै मोबाइल-मोबाइलमा भिडियो फरवार्ड भइरहेको छ । नम्रता र डिजे तान्त्रिक प्रेमी-प्रेमिका भएको र आफैले हेर्न मोबाइलबाट यस्तो दृश्य खिचेको चर्चा छ । भिडियो बजारमा आएपछि हंगामा भएको छ ।
युवा-युवती सहवासमा लिप्त छन्, वेला-वेला मोबाइलतर्फ पनि हेर्छन्, ‘ब्याकग्राउन्ड’मा वेला-वेला संगीत पनि सुनिन्छ । संगीतसँगै दुवैजनाले पालै-पालो मुख-मैथुन गरेका छन् । क्यामेराले दुवैजनाको यौनांग जुम पनि गरेको छ ।
भिडियो हेर्दा सहवास मात्र होइन, ‘सुटिङ’ पनि सहमतिमा भएको स्पष्ट बुझिन्छ । उनीहरू दुवै मदिराले मातेकाजस्ता देखिन्छन् ।
दुवैजनाले यस्तो क्रियाकलाप आइन्दा नगर्ने कसम खाएको चर्चासँगै पुरानो भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सो भिडियोमा देखिने युवाका रूपमा चर्चामा आएका डिजे तान्त्रिकसँग सम्पर्क हुन सकेन । नायिका नम्रताले भने सो भिडियो आफ्नो हो वा होइन भन्नेबारे केही बोलेकी छैनन् ।
विवादास्पद भिडियोबारे प्रस्ट पार्न पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै कुरा खोल्ने बताएकी छिन् । ‘जे भन्नुछ म भोलि
(आइतबार) भन्छु,’ उनले नयाँ पत्रिकासित भनिन्, ‘म पत्रकार सम्मेलन गर्छु, नभए प्रेस वक्तव्य जारी गर्छु ।’ उनले भिडियो विवादबारे चासो राखेकोमा नयाँ पत्रिकालाई एसएमएसबाट समेत धन्यवाद दिइन्, तर भिडियोबारे चर्चा गर्न नै चाहिनन् ।
शनिबार राति ९
बजारमा तपाईंको भन्दै एउटा अश्लील भिडियो आएको छ, त्यहीबारेमा तपाईंको प्रतिक्रिया लिऊँ
:१५ (एसएमएसमा नयाँ पत्रिका समाचारदाताको नम्बर गएको केहीबेरमा) नम्रताको मोबाइलबाट फोन आयो फोन- तत्कालै काटियो ।
: हेलो को बोलेको ?
यसबारेमा म अहिले केही भन्न सक्दिनँ । मलाई यसबारेमा फोन आएको आयै छ । म यो कुराले एकदमै डिस्टर्भ छु । मेरो सुटिङ भइरहेको छ । तनावले सुटिङमा पनि जान सकिनँ ।
होइन, यसबारेमा म अहिले केही बताउँदिनँ । भोलि नै क्लियर हुन्छ । ओके…बाइ ।
story behind Namrata Shrestha Nepali Blue Film . story behind namrata shrestha and dj tantrik sex video leaked . namrata sex video leaked ,nepali actress namrata blue film
Share this:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)	May 23, 2015 admin	Posted in Nepali SEX Stories	Tagged blue fiil of nepali actress, blue film of nepali actress namrata, namrata sex video leaked, namrata shrestha ko nango photo, namrata shrestha ko puti, namrata shrestha naked images, Namrata Shrestha Nepali Blue Film, namrata shrestha sex clips, namrata shrestha sex y pussy pics, nepali actress namrata blue film, nepali actress namrata sex movies, nepali bgrade film, nepali bhalu namrata shrestha, nepali chikuwa namrata, story behind namrata shrestha and dj tantrik sex video leaked	Post Permalink
← Nepali sex tips – महिलाहरुमा हस्तमैथुन र उब्जिने सवालहरुको समाधान	nepali sex tips – स्त्रीहरूको सेक्स अपिल कसरी बुझ्ने →